Kunconywa iChiefs ngokumisa uBobby - Ilanga News
Home Ezemidlalo Kunconywa iChiefs ngokumisa uBobby
Kunconywa iChiefs ngokumisa uBobby
Ngeke azihlanganise nabadlali bale kilabhu
SISHAYELWA elikhulu ihlombe isinqumo seKaizer Chiefs sokumisa okwesikhashana uBobby “Bobsteak” Motaung (osesithombeni) oyiMenenja-Jikelele yale kilabhu okusabalale ama-video akhe esebumnandini esikhathini lapho izwe likwi-lockdown ngenxa yokuhlasela mawala kweCovid-19.
Ngemuva kokusabalala kwama-video, iChiefs ibe isimumisa emsebenzini. Iqinisekise ukuthi ngeke azihlanganise nabadlali ejimini nasemidlalweni. UMotaung utholakale engenawo lo mkhuhlane kuwona wonke amahlandla okuhlolwa ayimpoqo abeqhutshwa yiChiefs ngaphambi kokubuya kwemidlalo yePremier Soccer League (PSL).
Kwenzeka lokhu nje, iChiefs ike yaphumela obala ngokuthi kunabadlali bayo ababili okutholakale ukuthi bahaqwe yilo mkhuhlane.
UThulasizwe “Joe” Nkosi ongumhlaziyi odumile kanobhutshuzwayo, utshele ILANGA ukuthi siyajabulisa isinqumo seChiefs sokumisa lesi sikhulu.
“Utshwala buvaliwe njengoba izwe likwi-lockodown. Ukufaka izifonyo nokuqhelelana kwabantu kuyimpoqo kulesi sigaba.
“Konke lokhu kuphuliwe kulo mcimbi. Lesi senzo singenza umonakalo omkhulu ngoba nabadlali bangabona ukuthi siyinto okumele yenziwe ngoba nomphathi wabo eyenza.
“Cishe naye-ke uBobby kuyo-msiza ukukhetha abantu ancikana nabo. Lokhu ngikusho ngoba umuntu obethwebula cishe ubazi kahle ukuthi kuyicala lokhu abebekwenza.
“Mhlawumbe bekuhloswe khona ukucindezela yena uBobby ngoba kwaziwa ukuthi unesikhundla esimqoka ekilabhini elandelwa yizinkulungwane zabantu kuleli,” kusho uNkosi.
UNkosi unolwazi olunzulu lokuphathwa kukanobhutshuzwayo kwazise ubeyingxenye yeBafana Bafana kwiNdebe yoMhlaba ngo-2002 eKorea/Japan kanti ungomunye wabasakazi bokuqala ababuthwa ngesikhathi kusungulwa iRadio Metro esidume ngeleMetro FM. Wayenza uhlelo lwezemidlalo.
Previous article“amashibhi andisa ubugebengu eNanda”
Next article“Itulo” ngothisha besithembu